Schottky diode: ihe ọ bụ na ihe pụrụ iche banyere ya | ngwaike efu
El diode schottky bụ ihe ọzọ na Ihe eletrọniki kacha adọrọ mmasị maka ọrụ eletrọnịkị. Otu ụdị diode dị iche iche nke nwere ụfọdụ peculiarities na-eme ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche na nke bara uru maka ụfọdụ ngwa. N'iburu ọsọ ngbanwe ya dị elu, a na-ejikwa ya na TTL logic ICs.
N'ime ntuziaka a, ị ga mara ihe ọ bụ Schottky diode, onye chepụtara ya, ihe onwunwe ya, ngwa, ebe ị nwere ike ịzụta ya, wdg.
1 Kedu ihe bụ diode?
2 Kedu ihe bụ Schottky diode?
2.1 Schottky diode arụ ọrụ
2.2 Uru na ọghọm dị na Schottky diode
2.2.1 Uru nke Schottky Diode
2.2.2 Ọdịmma Schottky Diode
2.3 Ọdịiche dị na diode junction PN
2.4 Ngwa enwere ike nke Schottky diode
3 ebe ịzụta diode ndị a
Kedu ihe bụ diode?
Un semiconductor diode Ọ bụ akụrụngwa eletrọnịkị nke nwere ọdụ 2 nke na-enye ohere ịgbasa ọkụ eletrik site na ya, mana naanị n'otu ụzọ, na-egbochi ụzọ ahụ gaa na nke ọzọ. Ihe ndị a na-eme ka ha baa uru nke ukwuu maka ngwa dị iche iche, dị ka ọkụ ọkụ. Enwere ike iji ya mee ihe maka njikwa.
Enwere diodes dị iche iche, dị ka:
Avalanche diode ma ọ bụ TVS, nke na-eme n'akụkụ nke ọzọ mgbe voltaji ntụgharị gafere voltaji ndakpọ.
LED diode, ike na-ebunye ọkụ nke agba dị iche iche dabere na ihe mejupụtara ya. Nke a na-eme mgbe ndị na-ebu chaja gafere nkwụsịtụ wee bupụta foton.
Ọwara mmetụta diode ma ọ bụ Esaki, nke na-enye ohere ịbawanye akara ma rụọ ọrụ na oke ọsọ ọsọ. Enwere ike iji ha na gburugburu ebe okpomọkụ dị oke ala, oghere magnetik dị elu, yana radieshon dị elu n'ihi nnukwu ụgwọ ego.
Ngwa diode, dị ka nke ọwara na nke na-emepụta ihe mgbochi na-adịghị mma.
laser diode, yiri LED, ma ọ nwere ike na-ekupụta a laser doo.
thermal diode, nwere ike ije ozi dị ka ihe mmetụta okpomọkụ, ebe ọ bụ na dabere na ya, voltaji dị iche iche.
Photodiodes, jikọtara ya na ndị na-ebu ụgwọ anya, ya bụ, na-enwe mmetụta maka ọkụ. Enwere ike iji ha dị ka ihe mmetụta ọkụ.
PIN diode, dị ka nkwụsị nkịtị, mana yana mpaghara etiti na-enweghị dopant. Nke ahụ bụ, oyi akwa dị n'etiti P na N. A na-eji ha dị ka mgba ọkụ dị elu, attenuators, ma ọ bụ ihe nchọpụta radieshon ionizing.
Schottky diode, Nke a diode bụ nke na-amasị anyị maka isiokwu a, ọ bụ diode na kọntaktị metal nke nwere obere mmebi voltaji karịa PN.
stabistor ma ọ bụ ntugharị aka diode, nke nwere ike ịkasi ike na voltaji na-aga n'ihu.
varicap, diode capacitance na-agbanwe agbanwe.
Kedu ihe bụ Schottky diode?
El Akpọrọ aha Schottky diode n'aha ọkà mmụta sayensị German Walter Hermann Schottky., ebe ọ bụ na ọ na-emepụta ihe mgbochi Schottky (metal-semiconductor ma ọ bụ MS junction) kama iji njikọ semiconductor nkịtị. N'ihi ya, n'ebe ụfọdụ ị ga-ahụ ya n'okpuru aha Schottky barrier diode ma ọ bụ n'elu ihe mgbochi diode.
Ekele dịrị otu ahụ, diode a nwere a ọdịda voltaji dị ala karịa PN diode, enwere ike iji ya na ngwa redio (RF) yana ngwa ngbanwe dị elu. Ọzọkwa, ihe ọzọ dị iche na silicon PN junction diode bụ na ọ nwere a-ahụkarị n'ihu voltaji nke 0.6 ka 0.75V, mgbe Schottky otu bụ 0.15 ka 0.45V. Mkpa ahụ dị ala maka voltaji bụ ihe na-eme ka ha gbanwee ngwa ngwa.
Mbelata ahụ nwere ike ịdịgasị iche site n'otu diode Schottky gaa na nke ọzọ, ebe ọ dabere na ọla eji. Iji chọpụta ihe ọ bụ, gụọ akwụkwọ data onye nrụpụta ngwaahịa.
Inglaghachi na isiokwu nke MS Union, metal na-abụkarị tungsten, chromium, platinum, molybdenum, ụfọdụ silicides (nke a na-ahụkarị n'ihi na ha dị ọnụ ala, dị ukwuu ma nwee ezi conductivity), ma ọ bụ na-acha ọla edo, ebe semiconductor na-abụkarị N-ụdị doped silicon, ọ bụ ezie na e nwekwara ndị ọzọ. ogige semiconductors. Akụkụ ọla bụ anode, ebe akụkụ semiconductor kwekọrọ na cathode.
Schottky diode enweghi oyi akwa, ma bụrụ nkewa ya dị ka ngwaọrụ semiconductor unipolar, karịa bipolar dị ka PN. Ọzọkwa, nke dị ugbu a ga-abụ n'ihi ọtụtụ ndị na-ebu (electrons) na-agafe na diode, na ebe ọ bụ na ọ dịghị P-mpaghara, ọ dịghị obere ndị na-ebu (oghere), na mgbe ọ na-atụgharị uche, ndị diode omume ga-akwụsị fọrọ nke nta ozugbo, throttling eruba nke ugbu a.
Schottky diode arụ ọrụ
Ma Schottky diode arụ ọrụ, nwere ike ime n'ọtụtụ ụzọ dabere na polarization:
ọ bụghị polarized: Na-enweghị eleda anya, MS junction (ịbụ ndị N-ụdị semiconductor), conduction band electrons ma ọ bụ free electrons na-esi na semiconductor gaa na metal iji guzobe nha nha steeti. Dị ka ị maara, mgbe atom na-anọpụ iche na-enweta electron ọ na-aghọ ion na-adịghị mma, mgbe ọ tụfuru ya, ọ na-aghọ ion dị mma. Nke ahụ ga-eme ka atom metal ghọọ ion na-adịghị mma na ndị nọ n'akụkụ semiconductor dị mma, na-eme dị ka mpaghara nkwụsị. Ebe ọ bụ na ígwè ahụ nwere ọtụtụ electrons n'efu, obosara nke electrons na-akwagharị bụ ihe na-adịghị mma ma e jiri ya tụnyere obosara dị n'ime mpaghara ụdị N. voltaji ga-abụ ihe mgbochi ndị eletrọn na-ezute na band conduction semiconductor mgbe ị na-agbalị ịgafe n'akụkụ ígwè (naanị ọnụ ọgụgụ dị nta nke electrons na-esi na S ruo M). Iji merie ihe mgbochi a, ndị electrons n'efu chọrọ ike dị ukwuu karịa voltaji arụnyere ma ọ bụ na ọ gaghị adị ugbu a.
Polarization ozugbo: Mgbe a na-ejikọta ọnụ ahịa dị mma nke isi iyi ike na njedebe metal (anode) na njedebe na-adịghị mma na N-ụdị semiconductor (cathode), Schottky diode na-aga n'ihu. Nke ahụ na-ebute ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke electrons n'efu na M na S, mana ha enweghị ike ịgafe ọ gwụla ma voltaji etinyere gafere 0.2v, iji merie ihe mgbochi ahụ (voltaji jikọtara ọnụ). Ya bụ, nke ugbu a na-asọpụta.
Ntughari mgbasa ozi: N'okwu a, a ga-ejikọta njedebe na-adịghị mma nke ọkụ eletrik na akụkụ ígwè (anode), na ihe dị mma na N-ụdị semiconductor (cathode). N'okwu ahụ, obosara nke mpaghara mmebi ahụ na-abawanye ma a na-ebipụ mmiri na-agba ugbu a. Ọ bụghị ihe niile ugbu a ka ebipụrụ n'agbanyeghị, n'ihi na enwere ntakịrị ntapu nke ugbu a n'ihi electrons nwere obi ụtọ na metal ahụ. Ọ bụrụ na a na-abawanye voltaji eletrọnịkị, ọkụ eletrik ga-eji nwayọọ nwayọọ na-abawanye n'ihi ike ọgwụgwụ nke ihe mgbochi ahụ. Ma ọ bụrụ na ọ rute uru ụfọdụ, mmụba mberede na ọkụ eletrik na-eme, na-agbaji mpaghara nkwụsịtụ ma na-emebi Schottky diode na-adịgide adịgide.
Uru na ọghọm dị na Schottky diode
Dị ka ọ dị na mbụ na ngwaọrụ ma ọ bụ sistemu ọ bụla, ị nwere mgbe niile uru na ọghọm ya. N'ihe banyere Schottky diode ha bụ:
Uru nke Schottky Diode
Obere nkwụsịtụ ikike: Na diode PN a na-emepụta mpaghara mmebi site na ụgwọ echekwara ma enwere ike. Na Schottky diode ebubo ndị a bụ ihe efu.
Oge mgbake ngwa ngwa: bụ oge diode na-ewe iji si ON (conductive) gaa na OFF (na-adịghị eduzi), ya bụ, ngbanwe ọsọ. Nke a metụtara nke a dị n'elu, ebe ọ bụ na ka o wee si n'otu steeti gaa na nke ọzọ, a ghaghị iwepụ ma ọ bụ kpochapụ ụgwọ ndị echekwara na mpaghara nkwụsịtụ, ebe ọ bụ na ha dị ala na Schottky, ọ ga-esi n'otu oge gaa na nke ọzọ ngwa ngwa. .
njupụta dị ugbu a: ihe ọzọ na-esi na nke a dị n'elu bụ na obere voltaji zuru ezu iji mepụta nnukwu ugbu a n'ihi na mpaghara nkwụsịtụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke na-adịghị.
Mbelata voltaji na-aga n'ihu ma ọ bụ voltaji mgbanye dị ala: Ọ dị ala ma e jiri ya tụnyere PN junction diode, ọ na-abụkarị 0.2v ruo 0.3v, ebe PN na-adịkarị gburugburu 0.6 ma ọ bụ 0.7v. Ya bụ, obere voltaji dị mkpa iji mepụta eruba ugbu a.
Ịrụ ọrụ dị elu: n'ihe gbasara nke dị n'elu, nke a na-egosikwa obere ikpo ọkụ na sekit ike dị elu.
Kwesịrị ekwesị maka ugboro ugboro: N'ịbụ ndị ngwa ngwa, ha nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na ngwa RF.
Obere mkpọtụ: Schottky diode na-emepụta obere mkpọtụ na-achọghị karịa diodes nkịtị.
Ọdịmma Schottky Diode
Tụnyere diodes bipolar ndị ọzọ, Schottky diode nwere naanị otu ọghọm dị na ya:
Ndaghachi azụ dị elu ugbu a: na-arụpụta a azụ saturation ugbu a karịa PN.
Ọdịiche dị na diode junction PN
Maka ozi ndị ọzọ gbasara ihe Schottky diode nwere ike inye aka na ọrụ gị, ị nwere ike ịhụ eserese gara aga na akụkụ nke PN silicon na GaAs diodes, na ụdị Schottky maka otu semiconductor ahụ. Ihe dị iche kacha mara amara bụ:
Metal-semiconductor junction ụdị N PN semiconductor junction.
Mbelata voltaji na-aga n'ihu dị ala. Mbelata voltaji na-aga n'ihu.
Obere mgbake mgbake na oge mgbake. Ọpụpụ mgbake dị elu na-atụgharị oge mgbake.
Ọ bụ unipolar. Ọ bụ bi-polar.
A na-emepụta ugbu a naanị site na mmegharị nke electrons. A na-emepụta ugbu a site na mmegharị nke oghere na eletrọn.
Ịgbanwe ọsọ. Na-agbanwe nwayọ.
Ngwa enwere ike nke Schottky diode
Schottky diodes bụ ihe a na-ahụkarị n'ọtụtụ ngwaahịa eletrọnịkị. Njirimara ha pụrụ iche na uru karịa diode ndị ọzọ pụtara na ha nwere ngwa dị iche iche dị ka:
Maka sekit RF.
dị ka ike rectifiers.
Maka akụrụngwa ọkụ dị iche iche.
N'ime sistemụ nwere oghere anyanwụ iji chebe ha pụọ ​​​​na chaja nke batrị nke a na-ejikọkarị ya.
Na maka nke a, ha nwere ike igosi ma onwe ha, dị ka agbakwunyere na IC.
ebe ịzụta diode ndị a
Ọ bụrụ na ịchọrọ Schottky diodes maka ọrụ gị ma ọ bụ ịmalite ịnwale ha ma ghọta ha nke ọma, ị nwere ike ịchọta ha na ụlọ ahịa ngwá electronic dị iche iche, yana Amazon. Ebe ị nwere ụfọdụ aro:
Mpempe akwụkwọ nwere diode 300 nke ụdị dị iche iche: rectifiers na Schottky.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ihe eletrọniki » Schottky diode: ihe ọ bụ na ihe pụrụ iche banyere ya
Cable Jumper: kedu ihe ọ bụ, kedu ihe ọ bụ, na ebe ịzụrụ